NVIDIA GeForce Zvino: inogona kunge iine rutsigiro rweLinux | Linux Vakapindwa muropa
NVIDIA GeForce Zvino: inogona kunge iine rutsigiro rweLinux
El mutambo wepasirose kufambira mberi papuratifomu yeLinux. Kana iwe ukaudza mumwe munhu makore gumi apfuura kuti Linux ichave nezvose zviripo nhasi, maererano nemaAPIs, vatengi senge Steam, kana veko NVIDIA kana AMD madhiraivha aripo, uye nhamba dzemazita ekuzvarwa aripo, zvinogona kuseka zvine ruzha. Asi chokwadi ndechekuti zvese zvakachinja nenzira yakanyanyisa, uye kunyangwe ichiri kure kure kubva paWindows, zvinhu zvikuru zvakawanikwa.
Parizvino, kuyerera mapuratifomu emitambo zvakare kuvhura nzira nyowani dzekumhanya katatu A vhidhiyo mitambo pane chero chikuva, chero bedzi mapuratifomu akatsigirawo yako system Imwe yacho ndeye NVIDIA GeForce Zvino, iyo kusvika zvino yanga isingawanikwe yeLinux, kunyange izvo zvaigona kuchinja ...
Uye ndeye kuti kwenguva yakareba, NVIDIA GeForce Iyezvino inowanikwawo iyo web browser. Nekudaro, NVIDIA yakanganwa nezve iyo penguin chikuva chezvino. Mukuwedzera kune Windows uye macOS, iyo iyo mutengi app yeiyi sevhisi inowanikwa, mukana wekuishandisa mu ChromeOS inofanirwa zvakare kutariswa.
Nenzira, izvozvi zvinoita kutamba neNVIDIA GeForce Zvino kubva kuChannel paLinux, ichiita shanduko yakapusa kuwedzera ChromeOS Mushandisi-Mumiriri muChromium-based browser. Asi ini handisi kureva izvo mune ichi chinyorwa, asi kune rutsigiro pasina kuita izvo zvinhu ...
Asi idzi nhau dzinogona kupfuura aya maGoogle Linux masisitimu. NVIDIA nguva pfupi yadarika akaita chiziviso nezve kuunza GeForce IZVOZVI kuSafari yeIOS futi. Uye akataura zvakare nezve mamwe mapuratifomu, kutora yake yekushambadzira sevhisi semutengi webRTC yemamwe mabhurawuza, izvo zvinogona kureva kuti zvaizoshandawo mu Chrome webhu mabhurawuza paGNU / Linux uye Android, asi nerutsigiro rwuri nani.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » NVIDIA GeForce Zvino: inogona kunge iine rutsigiro rweLinux
Pacman 6.0, Arch Linux's package maneja, inobvumidza kurodha panguva imwe chete
GNU Octave 6.1.0 inouya nezvinoverengeka maficha ekuwedzera uye nezvimwe